ကုန်းကုန်း ကွကွနဲ့ မိုးရွာမရှောင် နေပူမေ ရှာင် တံတားပေါ်မှာ တွေ့ရလို့ မေးကြည့် လိုက်တဲ့ အခါ…. – Sashalin
News & Entertainments
ကုန်းကုန်း ကွကွနဲ့ မိုးရွာမရှောင် နေပူမေ ရှာင် တံတားပေါ်မှာ တွေ့ရလို့ မေးကြည့် လိုက်တဲ့ အခါ….
December 8, 2019 admin Myanmar News 0
မြန်မာနိုင်ငံတော်တော်များများဟာ သူတစ်ပါး ကျေးဇူးကို အထူးသိတတ်တဲ့ လူမျိုးပါ။ ကိုယ့်အပေါ် ကျေးဇူးရှိဖူးသူ ၊ ကိုယ့်အပေါ် သင်ပြဖူးသူ မည်သို့သော သူဖြစ်ဖြစ် မြန်မာတွေဟာ ကိုယ်နှုတ်နှလုံး သုံးပါးစလုံးနဲ့ အခွင့်အခါသင့်တိုင်း ကျေးဇူးတရားးကို ဦးထိပ်ထားပြီး အမြဲတမ်းဆပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လူမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
အထူးသဖြင့် သက်ရှိ ကျေးဇူးရှင်တွေကိုသာ ကျေးဇူးဆပ်တာများပါတယ်။ သက်မဲ့တွေအပေါ်မှာတော့ မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာတော့ တောင်ကုတ်မြို့က ဦးစိုးမြင့်တစ်ယောက်တော့ မပါပါဘူး။
သူဟာ တောင်ကုတ်တံတားကို နေ့ရောညပါ မိုးရွာ ရွာ နေပူပူ အမြဲတမ်း သန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ စည်ပင်က ခိုင်းလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တံတားကြီးကို ကျေးဇူးတင်လို့ပါတယ်။ဖြစ်ကြောင်းအစုံကိုမေးကြည့်တော့ ယခင်က တောင်ကုတ်က သိပ်ပြီးစည်ကားလှတယ်မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတောင်ကုတ်(ကိုင်းရှည်)တံတားကြီး ဆောက်လုပ်ပြီးမှ ပိုမိုစည်ကားလာတာပါ။ ဒီလိုစည်းကားလာတော့ သူ့ကွမ်းယာဆိုင်လေးကလည်း ရောင်းအားတက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တံတားကောင်းလာတော့ ကောလိပ်တွေ ဆောက်လာတာ ၊ ဂေါက်ကွင်းတွေ တည်ဆောက်လာတာတွေကြောင့် သူ့ကွမ်းယာဆိုင်ဟာ ပိုမိုရောင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီတံတားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် အခုလို စီးပွားတက်တာ မို့ ဒီတံတားကို နေပူပူ မိုးရွာရွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရတာပါတဲ့။
အတော်လေးကို အတုယူစရာကောင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါနော်။ အခုလို သက်မဲ့တံတားတစ်စင်းအပေါ်တောင် ဒီလို ကျေးဇူးတရားသိတတ်ရင် ၊ သက်ရှိတွေအပေါ်တော့ ပြောစရာပင်လိုအံ့မထင်တော့ပါဘူးနော်။
ဒီလိုမျိုး ကျေးဇူးတရားသိတတ်သူတွေ များပြားစေချင်လို့ အတုယူနိုင်ဖို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကုန်းကုန်းကွကွ နဲ့ မိုးရွာမရှောင် နေပူမရှောင် တံတားပေါ်မှာ တွေ့ရလို့ မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတစ္ပါး ေက်းဇူးကို အထူးသိတတ္တဲ့ လူမ်ိဳးပါ။
ကိုယ့္အေပၚ ေက်းဇူးရွိဖူးသူ ၊ ကိုယ့္အေပၚ သင္ျပဖူးသူ မည္သို႔ေသာ သူျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာေတြဟာ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလုံး သုံးပါးစလုံးနဲ႔ အခြင့္အခါသင့္တိုင္း ေက်းဇူးတရားးကို ဦးထိပ္ထားၿပီး အၿမဲတမ္းဆပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ လူမ်ိဳးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
အထူးသျဖင့္ သက္ရွိ ေက်းဇူးရွင္ေတြကိုသာ ေက်းဇူးဆပ္တာမ်ားပါတယ္။ သက္မဲ့ေတြအေပၚမွာေတာ့ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာေတာ့ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕က ဦးစိုးျမင့္တစ္ေယာက္ေတာ့ မပါပါဘူး။ သူဟာ ေတာင္ကုတ္တံတားကို ေန႔ေရာညပါ မိုး႐ြာ ႐ြာ ေနပူပူ အၿမဲတမ္း သန႔္ရွင္းေရး လုပ္တဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဟာ စည္ပင္က ခိုင္းလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ တံတားႀကီးကို ေက်းဇူးတင္လို႔ပါတယ္။ျဖစ္ေၾကာင္းအစုံကိုေမးၾကည့္ေတာ့ ယခင္က ေတာင္ကုတ္က သိပ္ၿပီးစည္ကားလွတယ္မဟုတ္ပါဘူး။
ဒီေတာင္ကုတ္(ကိုင္းရွည္)တံတားႀကီး ေဆာက္လုပ္ၿပီးမွ ပိုမိုစည္ကားလာတာပါ။ ဒီလိုစည္းကားလာေတာ့ သူ႔ကြမ္းယာဆိုင္ေလးကလည္း ေရာင္းအားတက္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
တံတားေကာင္းလာေတာ့ ေကာလိပ္ေတြ ေဆာက္လာတာ ၊ ေဂါက္ကြင္းေတြ တည္ေဆာက္လာတာေတြေၾကာင့္ သူ႔ကြမ္းယာဆိုင္ဟာ ပိုမိုေရာင္းေနရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဒီတံတားရဲ႕ေက်းဇူးေၾကာင့္ အခုလို စီးပြားတက္တာ မို႔ ဒီတံတားကို ေနပူပူ မိုး႐ြာ႐ြာ သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ေပးရတာပါတဲ့။
အေတာ္ေလးကို အတုယူစရာေကာင္းတဲ့ စိတ္ဓာတ္ပါေနာ္။ အခုလို သက္မဲ့တံတားတစ္စင္းအေပၚေတာင္ ဒီလို ေက်းဇူးတရားသိတတ္ရင္ ၊ သက္ရွိေတြအေပၚေတာ့ ေျပာစရာပင္လိုအံ့မထင္ေတာ့ပါဘူးေနာ္။
ဒီလိုမ်ိဳး ေက်းဇူးတရားသိတတ္သူေတြ မ်ားျပားေစခ်င္လို႔ အတုယူႏိုင္ဖို႔ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္…..။
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်တွင် ကလေးသူခိုး ကလေးဝင်ခိုး နေတုန်းဖမ်းမိသွားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
မြန်မာအမျိုးသမီးလေး တွေ ဒီလိုတောင် ဖြစ်နေကြပြီလား… ဗီဒီယိုဖိုင်
မသိသူကျော်သွား သိသူများ ယူထားနော် သာမညဆရာတော်ဘုရားကြီး ချီးမြှင့်တဲ့ ပုတီးစိပ်နည်း
ဝင်ပြီးထွက်ဖို့ခက်တဲ့ တပ်မတော်မှ အောင်မြင်စွာ နှုတ်ထွက်ခွင့်ရခဲ့ပါပြီ
အမေစုပုံ profile ချိန်းထားတဲ့ သူတွေကို ဖင်မယားနဲ့ကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ယုန်လေး
နောက်ထပ် အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုပါလုပ်ကြံဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အမေရိကန်
အလယ်တန်းကျောင်းသားလေးနဲ့ အချစ်နယ်ကျွန်ခဲ့လို့ ကိုယ်ဝန်လဲရ ထောင်လဲကျခဲ့တဲ့ဆရာမ( ရုပ်သံ )